Sida loo helo xarun sare iyo macluumaadka kale ee waayeelladoodii |USAHello | USAHello
Ma waxaad tahay qof waddanka u soo guurey da 'ah ama qaxootiga? Ma leedahay waayeel ah ee qoyskaaga? Baro ilaha dhaqaale ee dadka waayeelka ah. Raadi xarun sare oo ay bartaan siyaabo kale in ay la kulmaan xubnaha ka weyn ee bulshada.
In USA, bulshooyin badan waa weyn, iyo qof kasta oo aan og yahay deriskooda. Way adkaan kartaa dadka waaweyn si ay ula kulmaan muwaadiniinta kale. Laakiin Umad kasta waxay leedahay meel bulshada u yeedhay xarun sare oo ka tirsan.
odayaasha qaxootiga Watch hadlaan khibradahooda
Sida dadka ku sugan video ah, aad u badan tahay ayaa ka badbaaday waxyaabo badan oo kaa dhigay xoog. Laakiin waxay noqon kartaa cidlo bilaabo nolol cusub ee dalka weyn. at USAHello, aynu ku faraxsan nahay halkan aad. Waxaan rabnaa in aan ka caawin aad jidka u hesho iyo dadka kale xiriir ula.
Sidee si ay ula kulmaan dadka xaafadda aad
Isticmaal maktabadda degaankaaga
maktabadaha American yihiin in ka badan buugaagta oo keliya. Waxay yihiin xarumaha macluumaadka iyo waxbarashada. Waxaad ku biiri kartaa fasalka computer ah, aad u ogaato oo ku saabsan dhacdooyinka degaanka, iyo aad u hesho talo ku saabsan shaqooyinka. Qaar ka mid ah waxay leeyihiin fasalo Ingiriis. Maktabado badan waxay leeyihiin fasalo loogu talagalay dadka si ay u bartaan akhriska iyo qoraalka ah. Haddii aysan sidaas ahayn, maktabadda kaa caawin karaan inaad hesho fasallada. Raadi maktabadda kuugu dhow.
Xarunta sare, waxay leeyihiin qado, kulan, fasalo, iyo hawlaha kale ee loogu talagalay oo keliya odayaasha. xarumaha sare Qaar ka mid ah xitaa waxaa loogu talagalay dadka cusub. xarumaha Senior yihiin inta badan bilaash ah. Waxaad tegi kartaa, waayo, maalintii oo dhan. Waxaad ku bixin kartaa qadar yar oo qado ama kulan. Laakiin hawlaha iyo fasalada ugu waa lacag la'aan. laybareeriga degmadaada ayaa kuu sheegi doona meesha laga helo xarumaha sare ee bulshada.
Haddii aad ka soo jeeda gobolka dal iman, aad u badan tahay in la la'yahay beeraha ama beerta. Laakiin xitaa magaalooyinka waaweyn, waxaad ka heli kartaa beerta bulshada. Waxaa aad u koraan karaan khudaarta adiga kuu gaar ah, caawin bulshadaada, iyo kulmi beeralayda kale iyo beeralayda. Raadi beerta bulshada.
Sidee si ay u bartaan wax cusub
Waxay noqon kartaa cidlo haddii aad ku nooshahay bulsho halkaas oo dadka aan ku hadlin luqaddaada. Ma rabtaa in aad si aad u hagaajisid Ingiriisi? Waa wax hawl ah, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa madadaalo. Iyo fasallada Ingiriisiga waa hab fiican si ay ula kulmaan dadka kale ee xaalad. waxaad ka raadin kartaa FindHello si aad u hesho fasallada Ingiriisiga kuu dhow. Ku qor magaalada iyo gobolka aad. Ka dibna dooro fasalada Waxbarashada iyo Ingiriisi.
Haddii aadan sida fikradda ah fasalka ama aadan heli karin in ay fasalka, waa okay. halkii, Waad awoodaa bartaan hadalka English online.
Xitaa haddii aadan isku dayaya in ay noqon muwaadin, Waad awoodaa qaadan our fasalka dhalashada free. Waxay kaa gargaari doontaa in aad Ingiriisi oo waxaan idin barayaa ku saabsan Maraykanka.
Volunteer la waayeelka ama carruurta
Waxaad ku caawin kartaa dadka kale ee. Siinta hadiyadda ah waqtiga aad iyo shirkad kaa caawin karaan sare oo kale waa kuwa keli ah. Read ku saabsan waayeel ah oo noqday saaxiibka sare. Haddii aad leedahay hay'adda dejinta degaanka, weydii haddii ay garanayaan qof kuwaas oo u baahan waxaa laga yaabaa in aad caawimo.
Waxaa laga yaabaa in ay dhaleen dugsiga degaanka ah. Waxaa laga yaabaa in aad tabaruci kartaa fasalka, qolka cuntada, ama lagu ciyaaro. Waxaa laga yaabaa in caruurta ku cusub oo u baahan caawimo gaar ah luqadda ay.
Waxaa muhiim ah in dadka waayeelka ah si ay u daryeelaan caafimaadkooda. Waxaa jira khayraad badan oo caafimaadka loogu talagalay dadka waayeelka ah ee Maraykanka.
Helitaanka caymiska caafimaadka
caymiska caafimaadka Public waayeelka waxaa lagu magacaabaa Medicare. waayeelka Most (da 65 ama ka weyn) Medicare. laakiin marka hore, Waa in aad ku nooshahay Mareykanka muddo ka badan 5 sano. Inta aad sugayso si aad u hesho Medicare, aad caymiska caafimaadka shirkad caymis ka heli kartaa iyada oo loo marayo is-dhaafsiga caafimaadka ee gobolka. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan caymiska caafimaadka ee dadka soo galeytiga sare.
Haddii aad tahay sharci (lahayn waraaqaha sharciga) ma waxaad ka heli kartaa caymiska caafimaadka. Laakiin waxaa jira xarumo caafimaad ee dalka Mareykanka, kuwaas oo ka caawiya muhaajiriinta aan sharciga lahayn. fiiri FindHello si aad u hesho daryeelka caafimaadka bulshada kuu dhow. Ku qor magaalada iyo gobolka aad. Ka dibna dooro Daryeelka Caafimaadka iyo Caafimaadka Maskaxda.
Going to dhakhtarka
Marka aad ballan dhigtaan dhaqtarka, waxaad codsan kartaa turjumaan. Ogow sida dhakhtarka si ay u tagaan.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aad samayn karto si joogto dad caafimaad qaba iyo kulmaan waa in ay ku biiraan class layli! Weydii xarunta sare oo aad, xarunta bulshada, ama fasalo maktabadda jimicsi oo ku saabsan kooxda da'da.
faa'iidooyinka Public waayeelka
Qaxooti ahaan ama qof kale oo deggan Maraykanka, waxaad xaq u yeelan kartaa manfacyada dadweynaha. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka loogu talagalay dadka naafada ah, shaqo la'aan ama ka weyn da 'gaar ah. badan oo ku saabsan manfacyada dadweynaha Baro.
Supplemental Security Income (SSI) waa in la caawiyo dadka waaweyn ee naafada ah, carruurta, iyo dadka ka weyn 65 kuwa dakhligoodu hooseeyo. Qaar ka mid ah muwaadiniinta aan heli kartaa SSI. Baro SSI aan muwaadiniinta.
note muhiim ah oo ku saabsan SSI: Qaar ka mid ah qaxootiga iyo kuwa aan muwaadiniinta kale oo aad u hesho SSI joojin doonaa qaadan ka dib 7 sano. Laakiin haddii aad muwaadin noqoto, waxaad sii wadi kartaa si aad u hesho SSI inta aad u baahan tahay. Baro sida si ay u noqdaan muwaadin Mareykan ah.
Gargaarka sharciga iyo xaaladaha degdegga ah
Dad badan ayaa ka weyn xanuunsado tan iyo xadgudubka (isagoo waxyeelladayda) iyo musuqmaasuq (laga khiyaameeyay). Waxaad u sheegi kartaa dhakhtarkaaga, booliiska, ama qof xarunta sare haddii aad la dhaqmay guriga ama haddii aad u maleynaysid in qof uu aad khiyaameeyay. Qofna ma loo oggol yahay inuu kugu yeelo, xataa haddii ay yihiin qoyska adiga kuu gaar ah. Si aad u hesho caawimaad ama warbixinta xadgudub, aad shabakadda internetka NAPSA iyo dooran gobolkaaga. Ka dib marka aad doorato gobolka, waxaad ka heli doontaa lambarka telefoonka ah in loo yeedho soo socda si map-ka.
Haddii aad u baahan tahay qareen, waxaad ka heli kartaa caawimaad sharci. Ku qor magaalada iyo gobolka aad. Ka dibna riix Xuquuqda iyo Sharciyada. Qaar badan oo ka mid ah adeegyada ku qoran ayaa kaa caawin kara in af kuu gaar ah. Waxaad ka raadin kartaa sharci yaqaanada la FindHello. Ku qor magaalada iyo gobolka aad. Ka dibna dooro Citizenship and Immigration.
Ma u baahan tahay macluumaad dheeraad ah?
Haddii aadan heli waxa aad raadinayso on this page, fadlan ma siin aadan kor u! halkii, weydii xarunta sare oo aad, hay'adda dib u dejinta, ama maktabadda. Shaqadoodu waa inay kaa caawiyaan inaad hesho waxa aad u baahan tahay. Waxaad isticmaali kartaa internet-ka si ay kuu caawiyaan, aad.
Halkan qaar ka mid ah erayada English kaa caawin doonaa in la fiirsado ku internetka:
heshid xarun ka tirsan … (ku dar magaalada magaceedu wuxuu aad)
heli ilaha dhaqaale ee dadka waayeelka ah ee … (ku dar magaalada magaceedu wuxuu aad)
Hel caawimo turjumaad
Haddii aad qabto la duldhigay dhibban Ingiriisi, isticmaalaan qalab turjumaad. Waxaad ku qor kartaa erayada galay Google turjumi oo waxay kuu sheegi doonaan wixii aad odhan lahaydeen in English. Or, Waad awoodaa ka heli caawimaad turjumaad bilaash ah iyo turjumaanada.
daawada Medical yihiin daawooyinka takhtarkaagu kuu siinayaa
Resources si ay u caawiyaan dadka waaweyn iyo daryeelayaasha ay
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dhibaataynta dadka waaweyn iyo fiisa